Sarin'ny rindrina Vinyl saribakoly ho an'ny ankizy China Manufacturer
Home > Products > Whiteboards Receptive Whiteboards > Fampitaovana mivadika ho fotsy > Sarin&#39;ny rindrina Vinyl saribakoly ho an&#39;ny ankizy
Ny vokatra Item No.BCKP-NS50-PSA, vinyl solaitrabe rindrina decal taratasy, dia karazana adhesive whiteboard malefaka, mora tapaka, kofehy, manodina, manodina, na afaka manamboatra tarehimarika. EN71 Ary mifanaraka amin'ny ROHS, tsy manana kiraro mafy na maranitra mafy izy ary tsy mahatonga ny fery na ratra ary azo antoka ny mitantana. Noho ny adhesive mato-tsolotsain'ny sela fantsika, ny solaitrabe sarimihetsika mora ny mametraka ary tsy hianjera mora foana . Amin'ny maha-tavoahangy azy, dia manana fanoratana tsara sy manala ny faharetany izy, mifanaraka amin'ny karazana penina, ny marika dia mety ho maina ao anatin'ny iray volana. Toy ny andriamby mora mandray Whiteboard Sheet atao amin'ny fampifangaroana vy vovoka amin'ny plastika (CPE sns), dia manana fahafahana tsara andriamby vonon-kandray, attachable avoakan'ireo andriamby.